आउटबर्स्ट - ब्रासिलिया - ब्राजील - 1aviagem.com
Previous post: Roteiro de3dias para Bariloche – Argentina
Next post: Compras em Ciudad Del Este valemapena? – Paraguai
पोष्ट गरिएको3सप्ताह पहिले द्वारा रोमोमो लुकाना
० 10.114/०09/२०२० मा (र बढ्दो) मा,, 05 .2020 मरेका छन्, यी केवल COVID-19 को कारणले हो। के पीडित वक्र कर्भको शिखर हेर्न चाहनेहरूको लागि पर्याप्त माथि गए? तपाईं मरेका मजदुरहरूसँग कसरी अर्थतन्त्र बचत गर्नुहुन्छ?
यदि तपाईं विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई कसरी आकर्षित गर्नुहुन्छ यदि तपाईं उनीहरूको छवि मृत्युसँग जोड्न चाहनुहुन्छ? तिनीहरू आउँदैनन्, तिनीहरूले ब्राजिलमा लगानी गर्ने छैनन्, र किन? किनभने राष्ट्रलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा छ। एक राष्ट्रपति जसले झगडा, र मृत्यु फैलाउन जोड दिन्छ।
शान्त थोरै बोल्सोमिनियन, जसले मलाई म होइन भन्थे, वैज्ञानिक पत्रिका द लान्सेट थियो: “ब्राजिलले कोभिड १ to लाई दिएको प्रतिक्रियामा सबैभन्दा ठूलो खतरा” थियो। प्रकाशनले सुझाव दिन्छ कि राष्ट्रपतिले आफ्नो आचरण परिवर्तन गर्नुपर्दछ वा "छोड्नु पछाडि" हुनु पर्छ ...
यो हुनसक्छ "यसलाई प्रयोग गर्न राम्रो हुन्छ"। जे भए पनि, ब्राजिलमा, उपाध्यक्ष जहिले पनि यसलाई समाधान गर्ने एक हुन्छ!
हामी गणतन्त्र भएकाले धेरै उप-राष्ट्रपतिहरूले ती पदको पदलाई ग्रहण गरेका छन् र अन्त्य गरेका छन्। तर ज्यादै उत्तेजित हुन नपरोस् भनेर म १ 1988 XNUMX (हाम्रो छैटौं संघीय संविधानको बर्ष र अहिले सम्मको वर्तमान) लाई उद्धृत गर्नेछु।
१- होसे सरने, जसले ट्याc्क्रेडो नेभ्सको लगभग सम्पूर्ण जनादेश पाउँदछन्।
२- इटामार फ्रान्को जसले महाभियोग फर्नान्डो कलरको शिकार हुने राष्ट्रपतिको टु .्गो समाते।
- मिशेल टेमर जसले राष्ट्रपति दिलमा रुसेफको महाभियोग पछि समाप्त भए पनि
सिम्पसनहरू खेल्न उनीहरूले मलाई क्रूसमा टाँग्ने छन्। तर यदि चीजहरू जारी नै छन् भने तिनीहरू ...
Ham- ह्यामिल्टन मोरियो, वार्म अपमा जानुहोस् ... जुन तपाईलाई फाँटमा प्रवेश गर्नु पर्ने हुन सक्छ।
(भास्काओ हेर्नुहोस्! उपाध्यक्ष हुनु एकदम खराब छैन)। (अब जब कि तिनीहरूले मलाई ढु stone्गा हानिरहेका छन्!)।
रुबिन्हो ब्यारिशेलो हेर्नुहोस्, उपाध्यक्ष हुनु सुरुको जस्तै राम्रो छ!
ठीक छ, चुटकुले, वर्तमान सरकारलाई ध्यान नदेखी of राष्ट्रपतिका are जना उप-राष्ट्रपतिहरू छन्। १35 को संविधान पछि दुई जना राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकाल समाप्त गरे। ती हुन्: फर्नान्डो हेनरिक कार्डोसो र लुइस इन्सिको लला दा सिल्भा। र मानौं ब्राजिल सरकारको यी सबै मिथक कथाहरू पर्याप्त छैनन्, उनीहरूसँग अझै दुईवटा पूर्ण जनादेशहरू थिए!
वास्तवमा मैले उनीहरूलाई मिथ्या भन्यो किनकि उनीहरूले पहिलो ब्राजिलियन ध्रुवलाई तोड्न सफल भए जुन क्याफे कॉम लिइट नीतिबाट आएको थियो जसमा सरकारले कलि र दुध उत्पादन गर्ने राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने पॉलिस्टास (कफी) र मिनिरोस (दुध) बिच एक अर्काको विकल्प खोज्यो।
(वास्तवमा तपाईले ब्राजिलियन कफीको स्वाद चाख्नु भएको छ? यो एकदम राम्रो छ! संसारकै सब भन्दा राम्रो बीचमा!) र मीनासबाट पनीर। यो "मात्र" खाताको धेरै राम्रो छ।
के तपाईंले बुझ्नुभयो कि घरमा बस्नु (ती जो बस्न सक्दछन्) उनीहरूले जीवन बचाउँन सक्थे (पहिलो स्थान) र आर्थिक पनि बचाउँन सक्थे? (दोस्रो स्थानमा)
राष्ट्रपतिका शर्त समर्थकहरूलाई, कुनै पनि कुराको लागि अनावश्यक रूपमा लड्ने भीड जम्मा गर्नेहरू। जसले आफ्नो जन्मभूमि उद्धारकको आलोचना गर्नेहरूलाई सेन्सर र धम्काउने कोसिस गर्दछन् जसलाई आफू स्वयं परमेश्वर नै ठान्दछन् (जसले पहिले नै आफू मसीह हो भनेर भन्दछन्, तर आश्चर्यकर्महरू काम गर्दैन, र त्यो ठीक हो! उहाँमा विश्वास गर्नुहोस्! यदि तपाईं ममाथि विश्वास गर्नुहुन्न भने, उहाँमा विश्वास गर्नुहोस्!) । यसका लागि म आफ्नो दुःखमा परेको छु ... किनकि राष्ट्रपतिको समानुभूतिको कमी र त्यो उग्रवादको क्रूरताले धेरै ब्राजिलियनहरूलाई मार्यो (उनका आफ्नै मतदाता सहित!) र उसले के भन्छ?
त्यसो भए के?
र तसर्थ, यदि झगडा उत्पन्न गर्नुको सट्टा उसले उदाहरण बसाल्छ भने ऊ राष्ट्रपति हो, ब्राजिललाई चाहिएको नेता। उनले आफ्नै स्वास्थ्य मन्त्री लुइज हेनरिक मन्डेटाको निर्देशन अनुसरण गर्दै बैठकहरूमा मास्क लगाएका भए यो हुने थिएन। यदि उनीले हालका मन्त्री नेल्सन टेचको निर्देशन अनुसरण गरेका भए यो हुने थिएन। यदि उनले डब्ल्यूएचओको कुरा सुन्थे भने यो हुने थिएन। तर ऊ ऊ भन्दा फरक सोच्ने जो कोही सुन्न सक्दैन। उहाँ तर्कको मास्टर हुनुहुन्छ तर प्रश्नहरूको उत्तर कसरी थाँहा दिनुहुन्न। र यदि ती गर्‍यो भने, यो अझै बन्द हुनेछ।
राजाको लागि योग्य शब्दहरू (स्पेनबाट) "तपाईं किन चुप लाग्नुभएन?"
ऊ थोरै मानिस भएको भए ... थोरै मानिसहरु मर्ने थिए।
तर यसको सट्टामा राष्ट्रपति, जोसँग मेडिकल डिग्री छैन, र रोगहरूमा विश्वास नगर्ने कोलोरोभाइन कोरोनाभाइरस विरुद्ध लडने उपाय हो भनेर भन्न रुचाउँछन्। (हो, यो सहि छ, यो अलि चिसो छ, तर फेनोलको सट्टा, उसले अझै पनि क्लोरोक्वाइन तोक्छ, एक रोगको लागि जुन उसले विश्वास गर्दैन भनेर पनि छ!)। उनी प्रदर्शन र समुहको आह्वान गर्न रुचाउँछन् र प्रजातन्त्रका अन्य शक्तिहरू बन्द गर्न आग्रह गर्न प्रोत्साहित गर्छन्। ऊ कहिल्यै आफ्नो दोषी मान्दैन र सँधै भन्छु कि अरुहरू उनीहरु हुन् जसले आफ्नो “चल्ती” सरकारको बाटोमा हिडिरहेका हुन्छन्, वास्तवमा जब त्यो बाटोमा हुन्छ, तर ऊ आफैंमा सफल हुँदैन। उनीसँग आफ्ना बच्चाहरूको मद्दत छ जसलाई उसले फलामको मुट्ठीले रक्षा गर्छ! ०१, ०२, ० 01 ... र ० ० हालसालै पत्ता लागेको थियो। हो, त्यस्तै उसले आफ्ना बच्चाहरूको गणना गर्दछ। यो खराब थियो, जैयर, तर केवल यदि तपाईंको सरकार "शानदार उस्ट्र" छ। ओह, यो सत्य हो कि मैले भुलेको छु कि यो तपाईंको बेडसाइड पढाइ हो। अब यो सबै अर्थ बनाउँछ! 😜
प्रेसको लागि "चुपचाप सत्य" (Ustra पुस्तक) पछाडि "शट अप"। 🤫
इडुआर्दो बोल्सोनारो, जो राष्ट्रपतिको संरक्षित बच्चाहरू मध्ये एक हुन्, उनले घोषणा गरिसकेका छन: "राष्ट्रिय कांग्रेस (विधायिकी शक्ति) बन्द गर्नका लागि एक सिपाही र एक सिपाही पर्याप्त छन्"। र त्यसैले एक फासिस्ट शासन स्थापना गर्न। ऊ जसले उहाँबाट फरक सोच्दछ उसलाई आक्रमण गर्छ र आफ्ना लाखौं अनुयायीहरूलाई पनि त्यसै गर्न उन्मुख गर्दछ।
मलाई लाग्छ ऊ वास्तवमै फासीवाद चाहँदैन। तर म भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा तपाईलाई के मन पर्छ त्यो निरंकुशता हो।
कामदारको दिनको बिचमा नर्सहरूको बिरूद्ध भएको ब्यवसायिकतालाई हेर्नुहोस्। ब्राजिलियामा तीन शक्तिहरूको वर्गमा जब नर्सहरूले क्रस बोक्ने गर्थे, आफ्नो टाढा राख्थे, मास्क लगाउँथे, तिनीहरू चुपचाप थिए, नारेबाजी नगरी, र केवल मृतको स of्ख्या सम्झन चाहन्थे (आज १०,१10.114 मा) र कामको अवस्थाको लागि सोध्न। कामदारको दिनमा)
र याइर बोलसनोरोका दुई उपासकहरूले के गरे? (हो, उपासकहरू, किनकि उनीहरूलाई सहयोगी भन्न सकिदैन)। तिनीहरूले नर्सहरूलाई आक्रमण गरे र उनीहरूलाई शारीरिक र मौखिक रूपमा आक्रमण गरे।
(भिडियो तपाईं यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। Correio24horas वेबसाइटबाट झिकिएको थियो)
र राष्ट्रपतिले के गरे? सामान्यतया, आक्रमणकारी महिलामा "कपडा सफा" गरे र भने कि मिडिया "सुपर डाइमेन्शि it" थियो कि यो त्यस्तो जस्तो थिएन, कि उनीहरूले आन्दोलनमा कसैलाई घुसपैठ गराउन सक्छ। पछि यो कुरा पत्ता लगाइयो कि आक्रमक एक "व्यापारी महिला" थियो जसले प्रजातन्त्र र राष्ट्रपतिको पक्षमा लगातार प्रदर्शन गरे। बदमाशहरूलाई भने कि उहाँ मानवअधिकार मन्त्रालयका लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ। हो, केटाले यस प्रकारको आक्रामकता प्रतिबद्ध गर्दछ र मानव अधिकार मन्त्रालयको लागि काम गर्दछ। कम्तिमा उसलाई हटाइयो, तर उसलाई पक्राउ गर्नु पर्ने थियो।
राष्ट्रपतिले उही पुरानो लिटानीलाई पछ्याउँछिन्, आफू विरूद्ध षडयन्त्रको सिद्धान्तलाई दोष दिदै। ज्यायर बोल्सोनारोमा शर्मिलाग्दो काम गर्ने मजदूर वर्गलाई अपमान गर्न जसले आफ्नो जीवनलाई छुरा प्रहार गरेर बचायो, र यो तथ्य यो हो कि तपाईलाई चुन्नेमा अन्त भयो। छुरा प्रहारको समयमा ऊ चिकित्सा सल्लाहमा वादविवाद हुने थिएन। राष्ट्रपति पद ग्रहण गरेपछि, के तपाईंले चिकित्सा निर्देशिकाहरूको आज्ञा उल्ल ?्घन गर्नुभयो र यी अपराधहरू कामदारको दिनमा ठीक पार गर्न दिनुभयो?
यदि उनी वास्तवमा राष्ट्रपति हुन् भने, उनले भनेका थिए, हामी अनुसन्धान गर्नेछौं र यदि दोषी छ भने उनीहरूलाई अनुकरणीय सजाय दिइनेछ ताकि यो फेरि नहोस्। उनले मजदुरहरूको पक्ष लिने थिए।
तर के उसले वास्तवमै मनपराउँदछ त्यो "भाइरल" हुनु पनको माफी संग।
ब्राजील गणतन्त्रका राष्ट्रपतिले भनाईहरु अनुसरण गर्छन्।
(मैले COVID-१ death मृत्यु चार्टसँग क्रेडिटहरू दिनको लागि बयानहरू कम्पाइल गरेन, तर राष्ट्रपतिले मनपराउने बित्तिकै उनीहरू बयानहरू भाइरल भइरहेका छन्)। यदि कसैलाई थाहा छ कि माथि चित्र कसले बनायो भने, त्यहाँ बोल्नुहोस्। अहिलेको लागि मात्र म भन्छु कि छविले राष्ट्रपतिले सोचे जस्तै प्रतिनिधित्व गर्छ।
र मलाई याद छोटो छ कि जैर बोल्सोनारोका दुई मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरियो (यो महामारीको समयमा) किनभने तिनीहरूले सही गरिरहेथे।
१ - स्वास्थ्य मन्त्री (लुइज हेनरिक मन्डेटा) चेतावनी दिन्छन् कि यदि सामाजिक अलगाव नगरेको खण्डमा "संक्रमित" र त्यसका परिणामहरुमा हुने मृत्यु (आज १०.११1) मा घट्ने छ। चेतावनी छ कि स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हुनेछ। (उनी राष्ट्रपतिको भाषणलाई बेवास्ता गर्दै साहसी थिए जसले मानिसहरूलाई काममा जान र उनको वरिपरि भेला हुन प्रोत्साहित गर्‍यो)। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई जहिले सोध्यो जसले चिकित्सा प्रशिक्षण लिएका थिए र भने कि क्लोरोक्वाइनले कोरोनाभाइरसको समस्यालाई साइड इफेक्ट र विशेष केसहरूमा लागू नगरेकोले समाधान गर्ने छैन।
२- ब्राजिलको न्याय र सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्री (पूर्व न्यायाधीश, र अब पूर्व मन्त्री) सर्जियो मोरो। कार वाश न्यायाधीश पनि भनेर चिनिन्छ।
संघीय पुलिस र चालु अनुसन्धानमा विशेष गरी राष्ट्रपतिको बच्चा ०१, ०२, ० 01 मा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई स्वीकार नगरेकोमा उनले राजीनामा गरे। राष्ट्रपतिले मन्त्रालयका मन्त्रीसँग कुरा नगरी पनि संघीय पुलिसको निर्देशक परिवर्तन गरे ( Sgrgio Moro) र साथै पुलिस निर्देशकको बहिष्कारको कार्यमा मोरोको हस्ताक्षर पनि राख्दछ।
मोरो ती पिलरहरू मध्ये एक थिए जसले पूर्व राष्ट्रपति लुलालाई जेलमा लगे, र तत्कालीन पूर्व राष्ट्रपति मिशेल टेमर (Dilma का सहायक)। दुर्भाग्यवश मोरो अब एक संघीय न्यायाधीश हुनुहुन्छ (के तपाईंले कहिल्यै तीन राष्ट्रपतिलाई हटाउने सोच्नुभएको छ?) तर प्रेस सम्मेलनबाट उनले यो कुरा स्पष्ट पारे कि वर्तमान राष्ट्रपति पुरानो नीतिभन्दा फरक छन्। उसको विदाईमा उनको क्याचफ्रेज थियो: "सही काम सँधै गर्नुहोस्"।
राम्रो समाचारमा आउनुहोस्?
ब्राजिलियनहरूलाई मेरो बधाई छ जसले बुझ्दछन् कि त्यहाँ चरमपन्थी, बायाँ र दायाँ भन्दा बाहिरको राजनैतिक संसार छ! (Café com Leite; FHCeLula; बिस्कुट वा क्र्याकर)। तपाईं ईन्जिन हुनुहुनेछ जुन यो देश बदल्नेछ। र यो जान्ने सबैलाई: "आफ्नो सोच बदल्नु स्वस्थ छ, केवल कुकुरले पनि गर्दैन।" (मन्त्री कारमेन लसियाको उद्धरण)।
मेरो बधाई मानिसहरुलाई जसले सरकारमा काम गर्छन् जसले काम गरेका छन् र उनीहरूको मुटु, बुद्धिमत्ता र विज्ञानसँग काम गर्छन्। र राष्ट्रपतिको अवज्ञा गरेर उनीहरूले ठीक गरे। तपाईंले त्यो मृत्युको घुमाउरो मोटाई धेरै गर्नुभयो। तिनीहरूले सम्भव भन्दा बढी गरे। यसमा सार्वजनिक कर्मचारीहरू, राज्यपालहरू, (भूतपूर्व) मन्त्रीहरू र मेयरहरू पनि सामेल छन्।
मेरो बधाई कामदारहरू जो छनौट गर्न सक्षम थिए र अझै पनि घरमा काम गरिरहेका छन्। एक्लोसनको यो कठिन क्षणमा र घरमा काम गर्ने अनुकूलनको रूपमा, यसले धेरै भिन्नता ल्याउँछ! जे भए पनि यो सुपर मार्केटमा जाने अधिकारको साथ एक घर पक्राऊ जस्तो देखिन्छ। याद गर्नुहोस्, यो क्षणिक छ।
र मेरो कृतज्ञताका साथ कामदारहरूसँग जोसँग त्यो छनौट थिएन जोखिम लिनुभयो र अझै पनि तिनीहरूको काम जारी राख्न जोखिम। सबैलाई पुग्न गाह्रो छ, तर म विशेष रूपमा केहि उल्लेख गर्दछु।
सडक सफा गर्नेहरू, ट्रक ड्राइभरहरू, मोटरसाइकल कूरियरहरू, एयरलाइन पायलटहरू, कुकहरू (बेकर्स, कन्फेसनरहरू, साल्गाडेइरोहरू आदि। खानपान व्यवसायमा सबैलाई), नर्सहरू, डाक्टरहरू, अस्पताल परिचरहरू, सबै स्वास्थ्य पेशेवरहरू, सुपरमार्केट क्यासियर्स, स्टकवादीहरू र अवश्य पनि, सफाई कर्मचारी! तपाईं सबै जसले आवश्यक कारणहरू भन्दा तपाईंको जीवनलाई जोखिममा पार्नुभयो, तपाईंको परिवारलाई बचाउनुको साथसाथै, अन्य धेरै परिवारहरूलाई बचाउनुभयो, खाना नखाईकन, आपूर्ति श्रृंखला बनाए र सफा गरेर। तपाईं नायक हुनुहुन्छ!
कम्पनीहरु लाई मेरो बधाई छ कि राष्ट्रपतिको कुरा सुनेन र कर्मचारीहरुलाई घरबाट काम गर्न दिए। साथै आईटी स्टाफलाई बधाई छ जसले अचानक यसको लागि (गृह कार्यालय) समाधान खोज्यो!
मानिस र कम्पनीहरु लाई बधाई छ जुन चन्दा दियो र जसले मजदुरहरुको ज्याला राख्न खोज्यो।
जीवन बनाउने कलाकारहरूलाई! आह! जीवनलाई शान्त पारिएको छ र उनीहरूको अनुहारमा एक मुस्कान राखिएको छ कि संस्कृति यस समयमा आवश्यक छ। तपाईंलाई धन्यबाद।
चर्चहरू, मन्दिरहरू, सभाघरहरू जसले भोक र दरिद्रहरूलाई मद्दत गर्न स network्कलन नेटवर्क बनाए।
र म यहाँ यो पोष्ट समाप्त गर्छु, ब्राजिलको राजनीतिको बारेमा थोरै कुरा गर्दै। यो पहिलो पोष्ट हो जुन म यात्राको कुरा गर्दिन, तर मैले यसलाई दर्ता गर्नु आवश्यक छ। बाहिर निस्किनुहोस्!
तपाईं यस पाठसँग सहमत वा असहमत हुन स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। र तल आफ्नो राय छोड्ने सम्भव छ। तर तपाईंले फेसबुक छोड्नुपर्नेछ र वास्तविक जीवन प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। वयस्क जीवनमा।
त्यसैले भाग लिनुहोस्। हुर्कियो।
१०,१10.114 को परिवारलाई पीडित म आफ्नो करुणा छोड्दछु। मलाई थाहा छ तपाईले के गर्नुभयो। र मलाई यो पनि थाहा छ कि अन्त्येष्टिमा जानको लागि सक्षम नहुनु कस्तो हो, किनकि उनीहरू COVID-19 को शिकार थिए। कडा अंगालो (भर्चुअल) महसुस गर्नुहोस्, मुटुमा कन्सोलेसन र यस पोष्टको अंश त्यो रेजिष्टर्ड राख्नु हो! जनताको पीडाको घडीमा राष्ट्रपति र उनका उपासकहरूको उदासीनता। केवल स्वर्गीय आराम। यो एक चमत्कारीको लागि पर्खिरहेको छ र गएकाहरूको स्मृतिलाई सम्मान गर्दै।
म फेरि सोध्छु, यदि तपाईं अलगाव छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, घरमा बस्नुहोस्। रक्तस्राव कम गर्नुहोस्, किनकि तपाईलाई पहिल्यै यो थाहा नपाई संक्रमित हुन सक्छ। र मानिसहरूलाई संक्रमित गर्नुहोस् जो तपाई जस्तो भाग्यशाली नहुने। र आशा राख्नुहोस्!
यो महामारी पास हुनेछ! हामी हामीलाई फेरि हेर्न आउन सक्षम हुनेछौं।
अब टाढा जानुहोस्, बोझहरू हटाउन अस्पतालहरू (वक्रलाई समतल राख्नुहोस्?) र चाँडै हामी फेरि एक अर्कालाई भेट्न र अंगालो हाल्न सक्षम हुनेछौं।
अंगालो (भर्चुअल) 😷 मास्क र #StayAtHome प्रयोग गर्नुहोस्
इतिहास Bolsonaro ब्राजिल कोरोनाभाइरस कोविड - १। त्यसो भए के जेयर बधाई छ। राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति